सुचना प्रविधि:: प्रकाश अभागी चाम्लिङ्ग
पाँच उपयोगी वेवसाइटहरु
हामी दैनिकजसो अनलाइनमा धेरै कामहरु गरिरहेका हुन्छौ । हाम्रो कामलाई सजिलो बनाउनका लागि विभिन्न अनलाइन टुलहरुको प्रयोग पनि गर्ने गर्दछौ । यो पोष्टमा म यस्तै केही वेवसाइटहरुको वारेमा चर्चा गदैछु, जसले तपाइको वेवसफर सजिलो वनाउन सहयोग गर्नेछन् ।
के तपाई निदाइरहेको वेलामा पनि आफ्नो फेसबुक वा ट्वीटर अपडेट होस् भन्ने चाहानुहुन्छ? यदी त्यसो हो भने यो वेवसाइट तपाइका लागि उपयोगी हुन सक्छ । स्टाटस अपडेट गर्ने टाइम तोकेर स्टाटस लेखेर छाडिदिनुस् तपाइ मस्त निन्द्रामा भएको वेलापनि तपाइको फेसबुक वा ट्वीटर अपडेट हुनेछ ।
यो Special Character हरुको संग्रह वेवसाइट हो । तपाइ फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक संजालहरु वा व्लगमा लेख्नेक्रममा यस्ता Special Character हरु प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने यो वेवसाइट तपाइको लागि उपयोगी हुनसक्छ । Chracter हरुमा Click गरेपछि कपि हुनेछन् जसलाइ तपाई आफुलाई आवश्यक आवश्यक परेको ठाउँमा पेष्ट गर्न सक्नुहुन्छ ।
joliprint.com तपाइले कुनै वेवसाइटमा राम्रो आटिलफेला पार्नुभयो तर तपाइसंग पढ्ने समय छैन? त्यो लेखलाई पछि पढ्नका लागि आफ्नो कम्प्युटरमा कतै सेभ गरेर राख्न चाहानुहुन्छ? उसोभए यो वेवसाइट तपाइलाई निकै उपयोगी हुनेछ । तपाइले दिएको लेख भएको पेजको लिंकको आधारमा यो वेवसाइटले सो पेजलाई पिडिएफ फम्र्याटमा कन्भर्ट गरिदिन सक्छ । कन्भर्ट भैसकेपछि तपाइ त्यसलाई डाउनलोड गर्न वा सामाजिक सञ्जालहरुमा वाढ्न पनि सक्नुहुन्छ ।
wetransfer.info यो यस्तो अनलाइन टुल हो जसको माध्यमवाट तपाई अनलाइन फाइल तथा डाटाहरु ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ ।यसवाट तपाई एकैपटकमा २ जिवी सम्मका डाटाहरु इमेलमा पठाउन सक्नुहुन्छ । अनलाइन फाइल ट्रान्सफरको लागि यो एउटा छिटो र छरितो सुविधा हो । आफेनो इमेल ठेगाना र ट्रान्सफस गर्ने इमेल ठेगानाको दिनुहोस केही म्यासेज भए लेखेर पठाउन सक्नुहुन्छ ।
bounceapp.com यदी तपाइलाई कुनैपनि वेवसाइटको पुरा स्क्रिनसट चाहिएको छ भने यो वेवसाइट निकै उपयोगी छ । तपाइलाई स्क्रिनसट चाहिएको वेवसाइटको ठेगाना दिएपछि यसले सो वेवसाइटको पुरा स्किृनसट तयार गर्न सक्छ ।